Somaliland.Org » Guddida Joogtada Golaha Guurtida Oo Kulan Xog Waraysi Ah La Yeeshay Wasiirka Arrimaha Guddaha
Guddida Joogtada Golaha Guurtida Oo Kulan Xog Waraysi Ah La Yeeshay Wasiirka Arrimaha Guddaha
August 27th, 2012 Comments Off Hargaysa (Somaliland.org):- Guddida joogtada ah ee golaha guurtida Somaliland ayaa maanta kulan xog waraysi ah la yeeshay wasiirka arrimaha guddaha Md Maxamed Nuur Caraale (Duur).
Kulankaasi dhexmaray wasiirka arrimaha guddaha iyo guddida joogtada ah ee guurtida oo ka dhacay xarunta baarlamaanka ee Hargaysa, ayaa wasiirku waxa uu warbixin ka siiyay guddida joogtada ee guurtida halka ay maarayso xaalada nabadgeliyada dalka iyo hawl qabadka wasaarada arrimaha guddaha.
Waxaanu wasiirku warbixintiisa ku sheegay in guud ahaanba xaalada nabad geliyada dalku ay xiligan la joogo meel fiican marayso isla markaana ay hawlaha wasaarada ee dhinaca amnigu u shaqaynayaan sidii loogu talo galay.
wasiirka arrimaha guddaha Somaliland Md Maxamed Nuur Caraale (Duur), ayaa warbixintaasi uu guddida joogtada golaha guurtida siiyay waxa uu ku soo qaaday hawlaha nabadaynta deegaanka Buuhoodle, isaga oo sheegay in hada loo gudbay wejigii labaad ee wada hadalada nabadaynta isla markaana cid kasta tabashadeeda laga dhegaysan doono.
Waxa kale oo uu wasiirku xusay in aarimahaas oo dhan ay saldhig u tahay dedaalka nabadaynta ee ku aadan sidii xal waara looga gaadhi lahaa colaadaha muddo ka taagnaa deegaanka Buuhoodle. Waxaanu tilmaamay in mudddaneyaasha golaha guurtidu ay kaalin wayn ku leeyihiin dedaalada nabada ee laga wado deegaanka Buuhoodle.
Wasiirku waxa uu intaasi raaciyay in ay ku rejo wayn yihiin in deegaanka Buuhoodle lagaga dhawaaqo nabad buuxda, lagana midho dhaliyo natiijada dedaalka nabada ee laga wado deegaankaasi, loona baahan yahay in la sii wado hawlahaasi nabada loogu raadinayo deegaanka Buuhoodle.
Maxamed Nuur Caraale (Duur), waxa kale oo uu sheegay in ay is-barbar socdaan qorshaha xukuumada ee dhismaha ciidan qaran oo cudud leh, taasi oo ah dhamaystirka dhismaha dawladnimo iyo helitaanka nabad buuxda oo dalka oo dhan ka wada hana qaada.
Waxa kale oo uu wasiirku warbixintiisa ku sheegay in ciidanka amaanka ee laamaha socdaalka la siin doono tababaro la xidhiidha shaqadooda, si ay u hantaan hawlaha ay qaranka u hayaan ee dhinaca socdaalada iyo amaanka xuduudaha dalka laga soo galo. Isaga oo xusay in wasaaradda arrimaha gudduhu ay bilawday qorshe lagu celinayo dadka sida sharci darada ah dalka ku soo gelaya.